umbhali: UAntika Kumari
Iindleko zohambo lwaseNorway: lubiza malini uhambo oluya eNorway?
January 14, 2022 UAntika Kumari imali, Norowe, hamba
INorway, kwingingqi yeScandinavia yaseYurophu, lelona lizwe lingasentla kunye nentshona yalo mmandla. Inwenwela phakathi koLwandle lweBaltic kunye noLwandlekazi lweArctic kwaye inezinye iindawo zaseYurophu ezinomtsalane. Kulula kakhulu ukuba
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eArgentina? Iimbacu eArgentina
January 14, 2022 UAntika Kumari Argentina, ababaleki
Abo ngabantu abanyanzelwa ukuba bashiye ilizwe labo okanye amakhaya abo: Ngenxa yokoyika intshutshiso ngenxa yembono yabo yezobupolitika, ukholo, ubuhlanga; Okanye ngenxa yokuba ubomi babo, ukhuseleko, okanye inkululeko yabo isengozini ngobundlobongela obucwangcisiweyo. Okanye enye
Indlela yokufumana i-visa eRashiya?
January 10, 2022 UAntika Kumari Rhashiya, ivisa
I-visa yaseRashiya yimvume ngohlobo lwesitika esincanyathiselwe incwadana yokundwendwela yabahambi. Inika umnini wayo ithuba lokujoyina, aphile, kwaye ashiye iRussia ngexesha elinikiweyo. Ibandakanya iinkcukacha ezinje: Ukungena kunye nokuhamba
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eGrisi?
January 10, 2022 UAntika Kumari Grisi, ababaleki
Abaphambukeli kunye nabantu abangenakubalwa banokufaka isicelo sokukhuselwa eGrisi ngokuchaza kwabasemagunyeni ukuba bafuna ukhuseleko lwamanye amazwe. Emva kokungenisa isicelo sokukhuselwa, umntu ocela ukukhuselwa kuqala ufumana ifom yesicelo. Ke ikopi yencwadana yokundwendwela njenge
1 2 3 ... 26 I zithuba ezilandelayo»